Ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - Factlọ ọrụ Ngwaahịa China
Ihe nkiri ị na-eme ihe nkiri
Nchịkọta: Ihe nkiri eserese, nke a makwaara dị ka ihe nkiri ihe nkiri pallet, bụ nke LLDPE (polyethylene linear low-density) dị ka isi akụrụngwa, gbakwunye ya na ndị na-eme ihe dị elu, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-apụ apụ, na-atụgharị ma jirizie oyi na-atụgharị. Dika usoro eji eme ihe na ebumnuche, enwere ike kee ihe nkiri gbasaa na ihe nkiri ntaneti, ihe nkiri igwe, ihe nkiri agba, obere ihe nkiri, na-eme ihe nkiri, na ihe ndị ọzọ. N'ihi ike ya siri ike, mgbanwe dị mma ...
Gbatia film kechie uzo
Isi: Kedu ọrụ na uru nke ihe nkiri Hand Stretch? Stretch Film ， A na-akpọkwa ihe nkiri, bụ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa. Ọ nwere ike ịgbatị ike, ịgbatị ike, nkwekọ dị mma, nrapado onwe onye, ​​ụdị udiri, ịdị nro, na nghọta dị elu. A na-eji ya esetị ihe nkiri maka iji aka, a pụkwara iji ya mee ihe nkiri igwe, nke enwere ike iji ya mee ihe na nkwakọ ngwaahịa na ngwongwo dị iche iche. Ihe gbatia nkiri nwere st ...
Ezi mma Obere ịgbatị Kechie na-apụta
Ntuzi: Obere agbatị uru: Enwere ike iji ya kpuchie arịa ụlọ akwa site na nsị, rips, ọkọ, na unyi. Site na njigide dị ike na nguzogide akwa nke siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị a fụchiri agaghị ada ma ọ bụ mepee. Enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nkeonwe. General nkọwa: (1) ọkpụrụkpụ: 15-40micron (2) Obosara: 5cm-20mm (3) Ogologo: 100-500m (4) Agba: transperent, ma ọ bụ dị ka customeied (5) Net arọ: dị ka omenala (6) Mbukota: katọn ma ọ bụ pallets. F ...
Mbukota Kechie na Aka
Isi: Mbukota Kechie na Aka Mgbe ọtụtụ ndị ahịa zụrụ anyị mbukota Kechie na Aka, ha na-ajụ ma agba nke njikwa ahụ nwere ike ahaziri. Azịza ya bụ ee. Ihe anyị niile bụ customizable. Agba nke aka nwekwara ike ahaziri dị ka gị chọrọ. Ọ bụrụhaala na ịnye anyị akara agba kwekọrọ, anyị nwere ike ịhazi agba gị na ya. Item Obosara ọkpụrụkpụ Net Ibu Elongation Sere ike Nguzogide Aka were ịgbatị Nkiri 4 ...
lldpe jumbo mpịakọta nnukwu gbatia Kechie
Isi: Ugbu a, gbatịa film mpịakọta Jumbo Roll ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu na oversea ahịa, anyị na-eji multilayer njiko mmadụ gbatịa gbatia film mmepụta akụrụngwa na-eme Jumbo ndinọ Film. Mgbe ịzụrụ ya, ndị ahịa na-eji igwe iji mee ka usoro ịmegharị na usoro mkpocha na akpaka, mgbe ahụ, jumbo roll stretch film na-ahaziri ahazi, na njedebe, kpochaa ngwaahịa ahụ na ụgbọ mmiri ndị ahịa mpaghara. Njirimara: Ezigbo akụnụba na otu ihe nkiri ihe owuwu kachasị mma ...
Elu Ogo mbukota pallet Jumbo igwe na-agba ihe nkiri ihe nrụpụta ihe nkiri eserese ihe nkiri
Isi: Xinzhihui bụ ọkachamara na ịmepụta LLDPE cast Jumbo roll stretch film, nke na-eji otu 100% amaghị nwoke akụrụngwa dị ka akwụkwọ ntuziaka iji gbatịa film na igwe iji gbatịrị film, anyị kwa ụbọchị na mmepụta nke jumbo mpịakọta gbatia nkiri bụ na gburugburu 20-30T, ndị nkịtị obosara bụ 18 "(450mm) na 20" (500mm), ọkpụrụkpụ bụ 20mic na 23mic, ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ndị na - ere ahịa zuru oke nke nwere ike ịtụgharị ya n'ime ihe nkiri ma ọ bụ igwe na - agbatị ma ọ bụ ụdị ọ bụla masịrị ha. ree a ...
LLDPE acha agbatị kechie ihe nkiri
Isi: LLDPE agba agbatị kechie ihe nkiri na-adọrọ adọrọ (nke a na-akpọkwa Agba nke Na-esite na Nkiri, Polyethylene Colored Stretch Film) a na-eji maka ngwugwu nzuzo na ụfọdụ ngwongwo mgbochi irradiation, ọ bụkwa ụzọ dị mma maka ọdịiche. Ihe nkiri na-acha agba agba nwere acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, nwa, agba ndụ. Yi gbatia ihe nkiri bụ mgbochi ìhè, mgbochi mmiri, mgbochi uzuzu, mgbochi mmiri. Acha agbatị agba ngwugwu ngwongwo na a dum na-enweghị ida n'oge njem. Inye OEM na ODM serv ...
Acha pe plastic rọba gbatia Kechie film
Isi: 1. Agba a na - esetị ihe nkiri nwere ihe na - acha uhie uhie na - acha anụnụ anụnụ na - acha uhie uhie na nke na - acha odo odo. Nkọwapụta: Mgbanwe siri ike: Njirimara Nro: Nkọwapụta Mmiri: Anyị na-ejikarị eserese eserese iji mata ụdị ngwaahịa dị n'ime, ọkachasị na ụlọ ahịa na ụlọ nkwakọba ihe, n'ihe banyere anyị na-eji ...
Isi: Ihe niile LLDPE na-eme ka ihe nkiri na-agbatị na igwe na-agbatị ihe nkiri nwere ike site na Jumbo roll stretch film, ibu dịkarị site na 25kg-50kg, ị nwere ike ịpịgharịa ihe ọ bụla ịchọrọ. Ọ na ọtụtụ-eji nile di iche iche nke ụlọ ọrụ Dị ka ngwá electronic, Building ngwaahịa, Machinery akụrụngwa, onunu, Transportation, nkwakọba, Textile na n'uwe, Agriculture, Onyinye nkwakọ wdg Njirimara: 1.100% recyclable LLDPE igba gbatia Kechie film. 2.Stronger gbatịa ọnụego 500%. 3.Excellent mgbapu & t ...